Masinina manosotra, ny polis ...
Masinina mankaleo: ampiasaina indrindra amin'ny filana ilaina amin'ny dingana alohan'ny handehanan'ny fitaovana mangatsiaka mangatsiaka ny fantsona.
Tsy azo soloina amin'ny indostrian'ny fanodinana fantsona izy io, indrindra amin'ny ozin-bozy, fanamafisam-peo fanamafisana, ozinina mpanohana ny rivotra ary faritra misy ny fiara. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fantsona tsy misy fangarony, toy ny fantsom-barahina, fantsom-by aluminium, fantsom-bary titanium, fantsom-bozaka nickel, fantsona zirconium, fantsom-bolo tsy misy fantsona, fantsona vy tsy misy fangarony, fantsona vy tsy misy fangarony, fisedrana capillary fantsona vita. Matetika izy io dia ampiasaina hanandramana ny fahasimban'ny fantson'ny kapila miaraka amin'ny tsindry ataon'ny 0.3MPa ~ 0.85mpa, ny tsindry rano ary ny tsindry an-drivotra dia manana tombony sy fatiantoka. Ny milina pneumatika * * dia afaka mizaha toetra 4, manasaraka ny karazany mandeha ho azy sy ny karazany mandeha ho azy; ny karazan-tsakafo manual manual manual sy ny banga amin'ny tanana dia mety amin'ny 1m-5m; ny karazana mandeha ho azy * * dia mifantina ny karazana mandeha ho azy ho an'ny fantsom-pifandraisana maharitra, satria lava loatra ny fitaovana fanandramana ary tsy mora ny mamaky sy mamoaka azy.
Ny fivoaran'ny savovo lehibe savaivony dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny teknikan'ny fikosoham-bary
Ny famaranana ambonin'ilay savaivony ivelany an'ny fantsom-boary embryon voahosotra amin'ny tanana dia zara raha ekena. Raha matevina loatra ny fantsom-panafody, dia sarotra ny mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fikosoham-bary. Satria matevina loatra ny sosona embryon ivelany ao anaty fantsona ary lalina loatra ny toerana misy ny embryon, dia fitaovana mavesatra ihany no ahafahana manodina azy. Amin'ny voalohany, singa iray na roa ihany no azo esorina. Aorian'izany, ny fahombiazan'ny asa dia nihatsara be tamin'ny famokarana azo ampiasain'ny orinasanay. Ny fampiroboroboana sombin-javatra enina, valo ary savaivony lehibe dia mifanaraka amin'ny fizotry ny fitakiana fikosoham-bary.
Raiso ny vidiny farany Leave a message.
Seranana: Shanghai, Sina
Fahaiza-mamokatra: 5000PCS / Taona
Fepetra fandoavana: L / C, T / T
Toerana niaviany: Zhangjiagang, Sina (Tanibe)
Laharana maodely: Rt-50sm
Fitaovana ara-materialy: Sodina sy bar
Diameter an'ny Pipe: 8-50mm
Masinina mana-poloney, ny fitaovana poloney ampiasaina amin'ny indostria samihafa dia azo zaraina ho karazana kapila, karazana fehikibo ary karazana lovia
Ny fitaovana polishing ampiasaina amin'ny indostria samihafa dia azo zaraina amin'ny karazana kapila, karazana fehikibo ary karazana lovia. Amin'izao fotoana izao dia misy ny mpandoto kapila roa sy ny mpandoto kapila roa ambin'ny folo, izay mahafeno ny filan'ny mpanjifa samihafa. Ny polera disk dia ny famolavolana angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana izay amporisihan'ny orinasanay mafy ho an'ny fantsom-pandrosoana tsy misy fantsona, fantsom-by vy, fantsom-bary titanium, fantsona nikela, fantsona zirconium ary fitsaboana vita amin'ny paompy Ny fitaovana hafa dia ny milina fandefasana fehikibo, izay mifampiresaka indrindra ny famaranana sy ny mari-pahaizana momba ny fantsona matevina vita amin'ny rindrina hahatratra ny fahombiazan'ny fantsona avo lenta.
Masinina fanapahana maimaim-poana
Masinina fanapahana maimaimpoana Chip: azo antsoina koa hoe milina fanapahana fantsom-by titanium vy. Izy io dia mety amin'ny fanapahana indray mandeha sy fananganana fantsom-bokatra boribory, fantsona toradroa ary fantsona miendrika manokana. Izy io dia manana rafitra famahanana mifamaly, tsy voafetra amin'ny halavan'ny fantsona, miaraka amin'ny automatisation avo lenta. Izy io dia afaka manafatra mivantana sary an-tsary telo-habe, mamantatra ho azy ny lalan'ny fanapahana ary manamboatra milina haingam-pandeha sy haingam-pandeha. Ny masinina dia manana rafitra ofisialy mandeha ho azy feno, izay azo voafantina arakaraka ny takian'ny mpanjifa. Ireo ampahany namboarina tamin'ny alàlan'ny fanodinana laser dia tsy manana burr, vava mainty, ary ny haben'ny vokatra mitovy dia misy tsy fitoviana.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia mifantoka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny famokarana fitaovana fanodinana fantsom-pahefana tsy mahazatra. Ankehitriny ny vokatra lehibe dia novolavolaina sy novokarina: scraper, milina pneumatika, press hidrolika, milina poloney, milina poloney mazava tsara, fantsom-pamokarana fantsom-bokatra, milina chamfering, milina lohan-doha ary fitaovana tsy fanao mahazatra.
Masinina manao poloney tsy misy foibe
Noheverina ho fomba mahomby indrindra amin'ny fanesorana tahiry mavesatra, ny fikolokoloana tsy misy foibe dia manome fandeferana akaiky sy famaranana ambonimbony.
Ny karazan'ireo vondrona mpizara dia be dia be ary misy ireto manaraka ireto:
Fitotoana tsy mitongilana
shafting sy horonana maivana
fantsona sy fantsona
Hevero ny fikosoham-bary tsy misy afovoany raha te-hametraka mialoha ny haben'ny baribaoo alohan'ny hanaovana chucker na famokarana faritra misy ny masinina. Orinasa maro no mampiasa anay hitazonana ny habeny amin'ny fihodinana mangatsiaka vita amin'ny ondana
Azontsika atao ny mitoto ny halavan'ny savaivony ivelany na ny "plunge grind" iray hidina amin'ny savaivony kely kokoa amin'ny ampahatelon'ny fotoana takian'ny fomba fitotoana varingarina amin'ny fitaovana manaraka:
vy vy sy vy vy
aliminioma sy ny firaka aminy
varahina sy ny firaka aminy
ny plastika, na dia tsy vovoka avokoa aza
vera sy quartz
Ny fanontam-pirinty dia iray amin'ireo fitaovana hitsapana ny fipoahan'ny fantsona. Raiso ny fomban'ny tombo-kase tarehy sy ny tombo-kase radial, ampifanaraho amin'ny fantsom-by vy tsy misy tombo-kase eran-tany, fantsom-by tsy misy fangarony, fantsom-boanjo vy titanium, coil miendrika manokana ary fisedrana hery hafa mitifitra! Izy io dia manana ny asan'ny fanandramana mialoha ny fitsapana, ny fitsapana ny fitsapana ny tsindry, ny fivoahan'ny rano, sns. Fanaraha-maso ny PLC, ny firosoana mandroso, ny fandidiana azo antoka.